Cabbiraaddu waxay ka digaysaa khatarta keydka erayada
Mashiinnada raadinta raadinta waxay dhaleecaynayaan walxaha muhiimka ah ee muhiimka ah, iyo maahan wax ficil ah ee koofiyada cad ee SEO. Waxaa jirey waqtiyo marka walxaha muhiimka ah ay si fiican u shaqeynayeen si loogu daro internetka internetka. Maalmahaas, makiinadaha raadinta gaar ahaan Google waxay si deg deg ah u xakameyn karaan liiska qaybta bogga leh ereyada muhiimka ah. Meelaha ay ku jiraan tiro badan oo ku saleysan inta ay ereyada muhiimka ah ee ay lahaayeen. Xitaa haddii ereyada muhiimka ah aysan ku xidhnayn bogga internetka, wali waxay ku riyootay guul sida Google horumarinta heerkooda guud - shink inc. Waqtigaas, waxaad si sahlan u qarin kartaa ereyada loo yaqaan 'keywords' iyo 'nacaybka' ee ku jira midabka midabada ama asalka cad. Dabcan, waxay u horseeday waayo-aragnimo aad u xun oo dadka isticmaala maaddaama dadka intooda badani aysan raadineynin boggaga internetka ee loo isticmaali jiray iyaga hortiisa. Google iyo makiinadaha kale ee raadinta ayaa bilaabay kadib in ay soo saaraan ereyada muhiimka ah ee lagu dhajiyay website-ka sababtoo ah dhammaan goobahaasi ma aysan aheyn wax war ah oo macna leh.
Cawaaqibta Ereyada muhiimka ah iyo Kala-Bixinta:
Julia Vashneva, Maareeyaha Guusha ee Macaamiisha ee
Google wuxuu isku dayayaa inuu ka dhigo Google Bot ka hor inta ka horeysa, shirkaduna waxay ka soo horjeedaa wax soo saarka iyo keyword keyword. Sidaa daraadeed, waa inaadan isticmaalin ereyada muhiimka ah ee ku yaala hal bog sida mashiinka raadiyaha raadinta ayaa mamnuucaya goobtaada inta uu noolyahay. Si kale haddii loo dhigo, waxaan dhihi karnaa in Google uusan u jeedin doonin ereyo muhiim u ah walxaha qarashka ah iyo waa ciyaar khatar ah. Lagama yaabo inay kugu hogaamiso meel kasta, ganacsigaaga waa la burburin doonaa.
Google iyo mashiinno kale oo raadin ah waxay jecel yihiin istaraatiijiyada khatarta SEO-ga ee khaas ahaan keyword keying iyo waxay doonayaan in webmasters aysan ku garaacin algorithms iyaga oo leh farsamooyinka noocan oo kale ah. Ku dar ereyada muhiimka ah ee maqaallada, iyo cufnaanta muhiimka ah waa inay ahaataa inta u dhexeysa laba ilaa shan boqolkiiba. Intii aad isticmaali laheyd ereyada muhiimka ah ee badan wakhti badan, waa inaad isticmaashaa labadii gaaban iyo keywords keywords iyo odhaahaha oo dhan moodooyinka si ay u siiyaan aragti dheeraad ah oo xirfad leh. WordStream waxay bixisaa macaamiisheeda badan oo ah qalabka SEO-yada oo kaa caawiya inaad abuurto ereyga gaaban iyo furayaasha dheeraadka ah iyo kala duwanaanta iyo hayso diiwaanka inta jeer ee ereyada muhiimka ah ee aad isticmaashay si aad u garaacdo heerka cufnaanta la rabo. Fikradda kale waa in la hirgaliyo isku midka la midka ah iyo makiinadaha raadinta macaamiisha aan madhnayn.